ထောင်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး တစ်ရက်အကြာမှာ ကမ႓ာ့အ ချောဆုံးအမျိုးသားအဖြစ် နံပါတ်(၁)နေရာကရွေး ချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန် – XB Media & News
ထောင်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး တစ်ရက်အကြာမှာ ကမ႓ာ့အ ချောဆုံးအမျိုးသားအဖြစ် နံပါတ်(၁)နေရာကရွေး ချယ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်
သရုပ်ဆောင်ပိုင်တံခွန်ကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကပါဝင်ပြီးလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅က၊ဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပြီးမတရားအဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရပါတယ်နော်။ပိုင်တံခွန်ကို မနေ့က ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ပုဒ်မ ၅၀၅-ကအရ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် ချမှတ်ခံရပြီး လက်ရှိမှာ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။
1990 မွစ၍ နှစ်စဉ်ရွေးချယ်နေကြ TC Candler ရဲ့ ကမ္ဘာ့အချောဆုံးအမျိးသားအယောက်၁၀၀စရင်းမှာ မြန်မာအနုပညာရှင် ပိုင်တံခွန်က ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာ့အချောဆုံးအမျိုးသားအယောက် ၁၀၀ ရဲ့ နံပါတ်တစ်နေရာကနေ ရွေးချယ်ဖော်ပြခံလိုက်ရပါတယ်။ပိုင်တံခွန်က2020မှာလဲကမ္ဘာ့အချောဆုံးအယောက်၁၀၀စာရင်းNo10နေရာမှာဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရသူပါပဲဖြစ်ပါတယ်၊
အခု2021မှာဆိုရင်လည်းထပ်မံပါဝင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်ဦးတည်းသောMyanmarMaleCelebrityပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။လူကသာထောင်ထဲမှာရှိနပေမယ့်လည်း အောင်မြင်မှုကတော့ ကမ႓ာပတ်နေတဲ့ ပိုင်တံခွန်အတွက် ဂုဏ်ပြုဝမ်းသားစကားလေးကိုလည်း ပြောခဲ့ကြပါအုံးပရိတ်သတ်ကြီးရေ.
သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာျပည္သူေတြနဲ႔အတူအမွန္တရားဘက္ကပါဝင္ၿပီးလမ္းထြက္ကာလူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာအားတက္သေရာပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ပုဒ္မ၅၀၅က၊ျဖင့္မတရားအမႈဖြင့္ထားျခင္းခံရၿပီးမတရားအဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရပါတယ္ေနာ္။ပိုင္တံခြန္ကို မေန႔က ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ပုဒ္မ ၅၀၅-ကအရ အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီး လက္ရွိမွာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းခံထားရတာျဖစ္ပါတယ္။
1990 မြစ၍ ႏွစ္စဥ္ေ႐ြးခ်ယ္ေနၾက TC Candler ရဲ႕ ကမာၻ႔အေခ်ာဆုံးအမ်ိးသားအေယာက္၁၀၀စရင္းမွာ ျမန္မာအႏုပညာရွင္ ပိုင္တံခြန္က ဒီကေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ကမာၻ႔အေခ်ာဆုံးအမ်ိဳးသားအေယာက္ ၁၀၀ ရဲ႕ နံပါတ္တစ္ေနရာကေန ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခံလိုက္ရပါတယ္။ပိုင္တံခြန္က2020မွာလဲကမာၻ႔အေခ်ာဆုံးအေယာက္၁၀၀စာရင္းNo10ေနရာမွာေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသူပါပဲျဖစ္ပါတယ္၊
အခု2021မွာဆိုရင္လည္းထပ္မံပါဝင္လာတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာMyanmarMaleCelebrityပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။လူကသာေထာင္ထဲမွာရွိနေပမယ့္လည္း ေအာင္ျမင္မႈကေတာ့ ကမ႓ာပတ္ေနတဲ့ ပိုင္တံခြန္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳဝမ္းသားစကားေလး ကိုလည္း ေျပာခဲ့ၾကပါအုံးပရိတ္သတ္ႀကီးေရ.
နားထောင်မိတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးမျက်ရည်ကျ စေတဲ့အထိ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလွန်းတဲ့ အိုင်းရင်း ဇင်မာမြင့်ရဲ့ မိဘမဲ့သီချင်းလေး
တစ်ချိန်က ရုပ်ရှင်အတူ ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးတဲ့ ပြေတီဦး၊ မင်း မော်ကွန်း တို့နဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ပြောပြလာတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်